Mac SD Kaadị Iweghachite: Olee naghachi ehichapụ Photos si Mac SD Kaadị
> Resource> Mac> Olee naghachi ehichapụ Photos si Mac SD Kaadị
Ka masịrị ma kwere na ehichapụ na formatted ọdịnaya site SD kaadị gị igwefoto dijitalụ ma ọ bụ ekwentị mkpanaaka na-ehichapu na-adịgide adịgide? Ị don'need na. Na a Mac SD kaadị mgbake ngwá ọrụ, ị nwere ike naghachi faịlụ site na SD kaadị na oké ala. Ihe ị chọrọ ime bụ edebe gị SD kaadị ọma na ịkwụsị iji ya weghara ọhụrụ foto na vidiyo. Mgbe ahụ, na-eso nduzi n'okpuru ịrụ SD kaadị mgbake na gị Mac.
Olee otú naghachi foto site na SD kaadị Mac
Nke mbụ niile, na-enweta ihe SD kaadị mgbake maka Mac usoro. A pụrụ ịdabere na ọkachamara otu onye nwere ike hụ na ị ohere ka mma iji naghachi ehichapụ ma ọ bụ formatted faịlụ site na SD kaadị. N'ihi ya, na-nke a nke ọma. Ọ bụrụ na ị ka na-adịghị nwere otu nhọrọ, i nwere ike m nkwanye ebe a: Wondershare Photo Recovery for Mac, 100% pụrụ ịtụkwasị obi software. Na nke a Mac SD kaadị mgbake software, ị nwere ike naghachi photos, video na ọdịyo faịlụ site na gị na kaadị 3 nzọụkwụ, n'agbanyeghị na ị na-ehichapụ, formatted ọ bụ furu efu gị faịlụ ruru mmadụ ọzọ ma ọ bụ amaghị ihe. Dum mgbake usoro na-ewe gị a nkeji ole na ole.
Download free ikpe mbipute a Mac SD kaadị mgbake software n'okpuru ugbu a.
Atụmatụ: Cheta ịzọpụta Doppler results ma ọ bụrụ na ị na-aga agbake hụrụ faịlụ mechara, iji gbochie data ọnwụ.
Ọ bụrụ na ị na-eji Windows arụ ọrụ usoro, i kwesịrị Wondershare Photo Recovery maka Windows.
Ọzọ, jikọọ gị SD kaadị gị Mac kọmputa, na ka ego zuru ezu nzọụkwụ nke SD kaadị mgbake na Mac ọnụ.
Step1. Ẹkedori usoro ihe omume ma họrọ a mgbake nhọrọ
Mgbe na nbudata na wụnye Mac SD kaadị mgbake software, ẹkedori ya ị ga-enweta bụ isi window dị ka ndị na. E nwere dị iche iche mgbake nhọrọ maka gị nhọrọ. Họrọ onye na-akọwa ihe kasị mma maka ọnọdụ gị. Ọzọ, ka anọgide na "Raw Iweghachite".
Step2. Họrọ gị SD kaadị maka scanning
Ebe a gị SD kaadị achọpụtara na-egosi. Họrọ ya na pịa "iṅomi" na-chọta furu efu faịlụ gị kaadị. Ọ bụrụ na ị chọrọ nụchaa gị Doppler N'ihi ya, ị nwere ike họrọ faịlụ ụdị gị mkpa.
Step3. Preview na-agbake faịlụ site na SD na kaadị Mac
Mgbe Doppler, ị nwere ike ihuchalu recoverable faịlụ n'ihu mgbake. Akara ọkacha mmasị gị ndị na pịa "Naghachi" zọpụta ha niile na gị Mac na otu Pịa.
IHE: Mgbe agbake faịlụ, adịghị azọpụta ha na mbụ SD kaadị. Ị nwere ike ịzọpụta ha na kọmputa gị ma ọ bụ ndị ọzọ na obere ngwaọrụ, maka nchekwa hà.